Igumbi leendwendwe elinomtsalane / igumbi IV 15m ^ 2
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguAriane
Kunye nathi uhlala kwindlu entle engaphandle ngqo emanzini. Iindlela zokuhamba ngebhayisekile kunye nokunyuka intaba zikhokelela kanye ngaphaya kwendlu. Siyavuya ukukunceda ufumane uhambo oluhle losuku kwindawo ekufutshane.
Izikhululo zikaloliwe i-Königsbronn kunye ne-Itzelberg zimalunga nama-900m ukusuka kwindawo nganye.
Igaraji enezixhobo iyafumaneka kubakhweli beebhayisikile.
Ps: Sifudumeza ngokuzinzileyo ngeepeliti zomthi zengingqi kwaye sisebenzisa umbane oluhlaza oyi-100%.
Uhlala kwigumbi leendwendwe elinamagumbi ama-4 eendwendwe kwaye wabelana ngegumbi lokuhlambela elinebhafu, ishawa kunye nomatshini wokuhlamba, indlu yangasese eyahlukileyo kunye nekhitshi eliphangaleleyo elinokufikelela kwi-terrace yophahla enelanga (ejonge emazantsi) ngombono wehlathi.
Siqinisekisa ukuba ubuninzi babantu abadala aba-6 bahlala kwigumbi ngaxeshanye. Kumava ethu, amagumbi aqhelekileyo anokulungelelaniswa ngokulula ngolu hlobo. aba bamva bajongwa ukuba bacocekile na ngokobuqu yonke imihla kwaye bacocwe ukuba kuyimfuneko.
Ikofu kunye neti zinokwenziwa ekhitshini nanini na xa kunikelwa.
Kukwakho ithuba lokudibanisa isidlo sakusasa esipheleleyo ("isidlo sakusasa sokuphuma") (i-muesli, ubisi, ukusasazeka okumnandi / okunetyuwa, ibhotolo, i-toast, ijusi ye-orenji ...).
I-15m ^ 2 igumbi le-IV linebhedi ekumgangatho ophezulu kunye noomatrasi abanophawu oluphakathi. Ikwanayo nomgangatho weparquet ye-oki, iwardrobe, ikhabhathi yedrowa, idesika kunye nezitulo ezi-2.
Igumbi linefestile emazantsi, ukuya ehlathini kunye ne-Albschäferweg, enokuthi ibe mnyama ngokupheleleyo nge-roller shutter.
* Iimveliso zokhathalelo, ibhrashi yamazinyo ...
* Iitawuli zokuhlambela ezi-2
* ikhaphethi yakhe yokuhlambela
Siyathemba ukuba uziva ukhululekile njengezinye iindwendwe zethu ...
Indawo yodwa: kanye emlanjeni ngokufikelela emanzini. Isikhephe esingaphakathi endlwini singasetyenziselwa uhambo olufutshane lomlambo. Unokujonga neentlobo ezininzi zezilwanyana ezinqabileyo ezifana ne-kingfisher, i-trout emdaka okanye i-beaver. Kwimizuzu eli-10 unyuke ngomlambo kumthombo, ezantsi e-Itzelberger Bona kunye ne-pedal boat rental kunye nebala legalufa elincinci.
Ich liebe die Natur, die Ruhe und Behaglichkeit abseits des Alltagsstress. Das alles teile ich gerne mit netten Gästen die es wertschätzen
Siyavuya ukunika iingcebiso ngohambo olukufutshane nakude :-)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Königsbronn